घुन्सा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले के–के भने ? (मन्तव्यको पूर्णपाठ) « Salleri Khabar
घुन्सा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले के–के भने ? (मन्तव्यको पूर्णपाठ)
९ मंसिर, ताप्लेजुङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घुन्सा जस्तो दुर्गम गाउँ आगामी तीन वर्षमा नै सुगममा परिणत हुने बताउँदै यस क्षेत्रको विकासका लागि यातायातलगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिका– ६ घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको आज उद्घाटन गर्दै उनले हालसम्म कञ्चनजङ्घामा आउने पर्यटकका लागि लिनुपर्ने विशेष अनुमति प्रावधान खारेज गरिने र तिनका लागि सो क्षेत्र खुला गरिने बताए । घुन्सावासीले राखेका विभिन्न मागलाई सरकारले ध्यान दिनेसमेत उनको भनाइ थियो ।
म हाम्रा युवाहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरुले सही बाटो लिनुपर्दछ । विकासको बाटो लिनुपर्दछ । आ–आफ्नो ठाउँको विकास कसरी गर्ने ? कसरी अगाडि बढाउनु पर्दछ ? एउटा नमूना त हाम्रो याङजुङ शेर्पा नै हुनुहुन्छ, जसले यस दुर्गम ठाउँमा जन्मिएर यस ठाउँको विकासको लागि फाउन्डेसन निर्माण गरेर विभिन्न ढंगले काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ । मलाई आज अलिक माइत आएजस्तोजस्तो पनि लागिरहेको छ । कोेसेली दिएर पठाउन खोजेकोजस्तो देख्छु । तर यो फेरिफेरि आइरहोस् भनेर हो कि के हो ? हामीहरुलाई यस्ता कोसेलीहरु धेरै नदिए राम्रो हुन्थ्यो, धेरै कोसेली नदिए नै राम्रो हुन्थ्यो, उता बस्न मन नलागेर फेरिफेरि आइरहुँजस्तो लागिरह्यो भने….१ त्यसैले कोसेलीहरु अलि धेरै नदिए हुन्थ्यो । खैर, म सबै साथीहरुलाई धेरैधेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु । तपाईंहरुकोे ल्होसारजस्ता चाडहरुको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु ।
भरसक राम्रो मौसम भएको बेला मात्रै आउने र यहाँ आउन हेलिकोप्टरबाट उड्ने गर्नुपर्छ । नत्रभने यो बाटो बनेपछि हेलिकोप्टरबाट धेरै आइरहनुपर्दैन । मान्छेहरु बाटोबाटै आउनजान सक्छन् र दुर्घटना पनि कम हुने स्थिति बन्छ । मौसमको खराबी कारणले दुर्घटना कम हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस घडीमा खासमा आज घुन्सा आएको बेलामा म डा. हर्क गुरुङ, तत्कालीन बन राज्यमन्त्री गोपाल राई र फिनल्याण्डका हाम्रा मित्र मुत्सुनेनसमेतका सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँहरुप्रति श्रद्धासुमन पनि अर्पण गर्न चाहन्छु । यस ठाउँको विकासलाई ध्यानमा राखेर नै उहाँहरु यहाँसम्म आउनु भएको थियो । अब मैले धेरै समय नलिऔं, हामीलाई छिटो फर्किनुपर्ने छ । त्यसकारण म फेरि सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु । सबैलाई धेरैधेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु ।